'पदेन सभासद्' को बयान
संविधान बनाउन दुई वर्षे लक्ष्य लिएर गठित संविधानसभाले दोब्बर समय खर्चिंदा पनि संविधान बनाउन सकेन। राष्ट्र्रको जीवनमा विरलै हुने यस्ता असफलताका कारणबारे जनताको चासो स्वाभाविक हो।
संविधान नबन्नुको कारण अर्को दलको नेता र पार्टीलाई देखाई नेताहरू आरोप– प्रत्यारोप गरिरहँदा जनता रनभुल्ल छन्। संविधानसभाभित्रका वास्तविक कथा थाहा पाउनु जनताको सुसुचित हुन पाउने मौलिक हक हो। संविधानसभाका गतिविधिलाई पत्रकारको हैसियतले नजिकबाट नियालेका राजेन्द्र फुयालको स्वतन्त्र विश्लेषणले सबैलाई सत्यसँग साक्षात्कार गराउने छ।
फुयाल संविधानसभाका स्वतन्त्र साक्षी हुन्। संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद र यिनका समितिमा निरन्तर उपस्थित भई रिपोर्टिङ गर्ने यी पत्रकार साथीहरूलाई हामी 'पदेन सभासद्' भनेर ठट्टासमेत गर्थ्यौं।
फुयालले संविधानसभा बहसको प्रारम्भदेखि निर्वाचनमार्फत् सभा गठनसम्मका आरोह–अवरोहलाई ऐतिहासिक विवेचनासहित लेखेका छन्। नेपालमा लिखित संविधानको थालनी र संविधानसभाको बहससँगै सुरु भए पनि संविधानसभाबाहिर आयोग, समिति र व्यक्तिहरूबाट जारी छ वटा संविधानको असफलतापछि संविधानसभा गठन भयो। पुस्तकमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रयास र यसमा उत्पन्न गतिरोधबारे गरिएको विवेचनाले संविधानसभा जन्माउनका लागि मुलुकले प्रसव वेदना बेहोरेको स्मरण हुन्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा भएको दलगत सहभागिता, दललाई प्राप्त परिणाम, संविधानसभाले खर्चेको समय, आर्थिकसम्बन्धी तथ्यांकले पुस्तकलाई रोचक बनाएको छ।
२०६५ जेठ १५ गते दलहरूबीचको प्रतिबद्धताअनुरूप गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि प्रारम्भ संविधानसभाको यात्रा बिस्तारै शिथिल बन्दै गयो। साना विषयमा पनि दलबीच हुने गरेका विवादका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य कानुन संविधानसभा नियमावली बनाउन साढे पाँच महिना लागेको अनुभव पुस्तकमा समेटिएको छ। यो दलबीचको असमझदारीको ज्वलन्त उदाहरण हो। असमझदारी झांगिदै पछिल्लो समय संविधानसभा विघटनसमेत भयो। सभाभित्रका सबै समितिमा भएका छलफल, प्रस्तुत प्रतिवेदन, सहमति–असहमतिका विषयको पुस्तकमा संक्षेपीकरण गरिएको छ। समितिहरूका कामकारबाही असल र सफल देखिन्छन् भने समग्र सभाको व्यवस्थापन अव्यवस्थित र कमसल। संविधानसभाभित्र कार्यरत समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि विवादका विषयको पहिचान, विवाद समाधानका प्रयास सहमतिनजिक पुग्ने र आफैं टाढा भाग्ने चरित्रको प्रदर्शनका विषयलाई सरल ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
संविधान पहिले वा शान्ति प्रक्रिया पहिले भन्ने विवाद संविधानसभाबाहिर र भित्र निकै चर्किएको विषय हो। सात दलबीच संविधान निर्माणपूर्व शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको थियो। २०६५ असार ११ गते भएको दलबीचको लिखित सहमतिले शान्ति प्रक्रिया छ महिनामा पूरा गर्ने निर्णय भयो तर यो विषय पछिसम्म विवादमा रहेकोले संविधान निर्माणमा समस्या आएको पुस्तकमा उल्लेख छ।
फुयाल संविधानसभामा संविधान निर्माणको कामभन्दा सरकार गठनको विषयले प्राथमिकता पाएको मान्छन्। दलहरूबीच सत्ताका लागि भएका विभिन्न अभ्यासले आपसमा उत्पन्न कटुताको कारण संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको तर्क छ। अन्तरिम संविधानले सरकार गठन र सञ्चालन विधिको आधार राष्ट्रि्रय सहमति उल्लेख गरेको, संविधानसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको, सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेको र संविधानसभाको म्याद थप गर्दा प्रत्येकपटक सरकार परिवर्तनका सर्त जोडिएको विषयलाई सूक्ष्म विवेचना गर्दै लेखकले 'संविधान सत्ताको सिकार बनेको' निष्कर्ष निकालेका छन।
संविधानसभाको कार्यकालमा सांसद खरिद–बिक्रीका लागि विदेशीसँग रकम माग्नेदेखि आपराधिक क्रियाकलापमा स्वयं सांसद संलग्न भएका घटना उठाई राम्रा–नराम्रा पक्षको उजागर पुस्तकले गरेको छ। संविधान निर्माणको प्रयासमा भएको आर्थिक व्यय जनतामा निकै चासो र आलोचनाको विषय बनेको छ। लेखकले संविधानसभामा सरकारी, गैरसरकारी, दातृ संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण यथासम्भव दिन खोजेका छन्। उपलब्ध विवरणबाट पाठकले पारदर्शी र अपारदर्शी पाटा केलाउन सक्नेछन्। लगानी र प्रतिफलको विवरणले यसबारेको भ्रम चिर्नसक्छ।
यो पुस्तक इतिहासको सहयोगी ग्रन्थ बनेको छ। संविधानसभाको पहिलो प्रयोग वा अभ्यास असफल भएपछि इतिहासको पाटो बनिसकेको छ। संविधानसभाको गतिविधिमा चासो राख्ने जोसुकैका लागि पुस्तक जीवित दस्तावेजका रूपमा रहेको छ। नेपालको संविधानसभाको अभ्यास र असफलता सर्वत्र अनुसन्धानको विषय बन्नेछ। त्यस्ता अनुसन्धानकर्ताका लागि यो पुस्तक सन्दर्भ सामग्री हुनेछ।
संविधानसभा असफतलाको कथा बोकेको यो पुस्तकले संविधानसभा गठनदेखि अवसानसम्म भएका गल्तीहरू केलाउन सफल छ। संविधानसभाबाट नै संविधान बनाउन अर्को संविधानसभाको तयारी भइरहेका बेला विगतका गल्ती केलाउन, तिनको निदान गर्न र त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। भोलिको संविधानसभाले हिजोका गलत अभ्यासलाई न्युनीकरण गरेर जान सकेमात्र सफलता पाउन सकिन्छ ।
दलहरूबीच असहमति रहेका मूलतः संघीयता र शासकीय स्वरूपबारे पनि सहमति भइसकेको अवस्थामा सहमतिबाट पछि हट्ने प्रवृतिका कारण संविधान निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा संविधान जारी हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन र अन्य उपयुक्त विकल्पका लागि संवैधानिक व्यवस्थासमेत नगरी यसको अवसान भयो। रूपान्तरित संसद रहँदा आफ्नाविरुद्ध अविश्वास आउन सक्ने तत्कालीन सत्ताको डर र मनोविज्ञानका कारण पनि जटिलता थपिएको तर्फ फुयालले संकेत गरेका छन्। पुस्तकका केही विषयमा थप गहिराईसाथ प्रवेश गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने पाठकमा लाग्न सक्छ। लेखकले आगामी संस्करणमा पूर्णता दिनेछन् भन्ने विश्वास छ।
प्रतिरोधको मौसममा एक कवि
'प्रश्नहरूको कारखाना' किताबको नाम फाइनल भएको थियो । अलि लामो भूमिकासहित कुल ३३ थान कविता बुझाएकी थिएँ, केही दिनअघि । यसको फाइनल काम हेरूँ र दसैंअघि नै विमोचन गर्ने गरी...
विद्रोहको पहिलो पाइला!
काठमाडौंको रत्नराज्य कलेजबाट आइए सकेर बिए पढ्न फेरि आफ्नै जन्मथलो पोखरा फर्किएँ म।त्यति बेला पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्ने छात्राहरू खासै हुन्थेनन्। हदै पढे एसएलसीसम्म पढ्थे अनि पछि बिहे बन्धनमा बाँधिन्थे।...
पेट्रोल, डिजेल, ग्यास ठप्प भएको नौ दिन भयो। आजसम्म त जेनतेन चलेकै थियो तर भर्खरैबाट गुन्जमानको बाइकको ट्यांकी रित्तियो। त्यही बेला नानाभाँती कामहरू असिनाजस्तो पररर बर्सिए।
सलाम गुलजार साहब!
'कुनै पनि सम्बन्ध तत्काल अन्त्य हुँदैन, न त यो मर्छ। यो फरक अर्थमा बद्लिन्छ मात्र।'गुलजार यसै भन्थे, सम्बन्धका बारेमा।गुलजारको अनेकसित अनेक सम्बन्ध छन्, ती सम्बन्धको आ–आफ्नै अर्थ छ। नायिका मीनाकुमारीसितको...
कविताको आँखीझ्यालमा आफूलाई लगेर टाँस्ने हो भने हामी बाँचिरहेको पृथ्वीको खण्डमा एकथरी सपना घोलेर पिइरहेका छन्। निरर्थक हल्लाबीच आफ्नो अस्तित्वका लागि नाकको उचाइ देखाउने धमिलो उत्कट उत्कण्ठाका साथ अर्कोथरी लागिरहेका...